Toliara : « Fitaratry ny fampandrosoana », hoy ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaToliara : « Fitaratry ny fampandrosoana », hoy ny Filoham-pirenena
« Efa mihilana aty Atsimo ny masoandro ary manana anjara amin’izany indrindra i Toliara sy ny Faritra Atsimo Andrefana ». Io no nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, nandritra ny lahateny nataony tamin’ny vahoakan’i Toliara. Porofon’izany fihilanan’ny masoandro izany, hoy izy, ny fahazoan’i Toliara sy ny Faritra Atsimo Andrefana fanampiana sy fotodrafitrasa maro. « Azo lazaina fa i Toliara no fitaratry ny fampandrosoana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao », hoy hatrany izy.
Taorian’ny fanoloran’ny Filoha ny ampahan-dalana, mirefy 107 km, amin’ny Lalam-pirenena fahasivy (RN-9), nanolotra ary nitokana ny lalana vao miditra an’i Toliara avy amin’iny RN-9 iny ihany koa izy. Lalana mirefy 5 km no vita soa amantsara ary natolotra ny vahoakan’i Toliara izany omaly. Marihina fa lalana mifandray amin’ny RN-9 ihany ity notokanan’ny Filoha ity. Izany hoe, lalana mampifandray an’i Toliara sy ireo faritra manodidina, toa an’i Mangily, Ifaty, Madiorano, sns, mihazo an’iny RN-9 iny ny Lalana Anketa. Tamin’izany indrindra koa no nanambaran’ny Filoham-pirenena fa mila mifamezivezy ny mponina indrindra fa ny vokatra. « Porofo ho amin’ny fampandrosoana izao. Mila kojakojaina ihany koa anefa ireny fotodrafitrasa ireny satria fananana iombonana izy ireny », hoy izy.
Ankoatra izay, natolotra tamin’ny fomba ôfisialy ihany koa ny Birao ny Fitantanana rezionalin’ny ministeran’ny Fampananan’asa sy ny Fampiofanana Teknika ny Faritra Atsimo Andrefana ao Toliara ihany. Marihina fa nohatsaraina ity birao ity ka nanjary niova endrika tanteraka. « Misitraka ny zony ny tanora amin’ny fitadiavana asa amin’ny fananan’izy ireo ity birao rezionaly ity », hoy ny Filoha. Nanafatrafatra koa izy tamin’izany fa antoky ny fampandrosoana ny asa eo anivon’itony biraom-panjakana itony ihany koa ny fanomezana sy fanatsarana ny fitaovam-piasana. Noho izany, hoy izy, tokony handroso ary handroso hatrany ny fitantanana sy ny fikirakirana ny raharaham-panjakana amin’ireny fitantanana rezionalin’ireo ministera ireny. Nambarany fa hovoavaha ny olan’ny mponina amin’ny fampananan’asa sy ny fampiofanana teknika.
Nitohy hatrany kosa ny fanomezana avy amin’ny Filoham-pirenena miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Notokanana omaly ihany koa mantsy ny Lapan’ny Tanàna ao Toliara I. Nohatsaraina sy nohitarina mantsy ny Tranoben’ny kaominina. Tsy vitan’ny fitokanana, ny fahavitana, ny fanatsarana sy ny fanitarana fotsiny ity tranoben’ny Kaominina ity fa nanolotra fitaovana infôrmatika isan-tsokajiny ihany koa ny Filoham-pirenena tamin’izany. Tetikasa niarahan’ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny ministera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena izany, tafiditra indrindra amin’ny Tetikasa Pic II izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena. Ankoatra izay, ho famahana ny olana amin’ny fikarakara ireo antontan-taratasy mahakasika ny fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny no anton’ny fanavaozana sy ny fanatsarana ary fanolorana ireo fitaovam-piasana. Ahitana « guichet unique » amin’ny fandoavan-ketra ihany koa ao amin’ilay trano vaovaon’ny kaominina.
Niova endrika ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Ankoronga, Toliara. Nohavaozina sy nohitarina ihany koa izy ity ka mbola notokanan’ny Filoham-pirenena ihany koa. Nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa ho seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ihany koa ity ao Toliara ity noho ny fahazoany ilay « balisage lumineux ». Izany hoe, raha tsy afaka mandray fiaramanidina intsony ny seranana ao Ankoronga teo aloha teo rehefa mody masoandro iny, manomboka amin’ny 6 ora hariva, efa afaka mandray fiaramanidina amin’ny andro alina izy ankehitriny noho ny fahazoany io « balisage lumineux » io. Marihina fa mitentina 40 tapitrisa Dolara ny tontalim-bidin’ireo fitaovana vao napetraka ireo.
Tsy vitan’izay ihany fa noho ny fanitarana ny seranana ihany koa, afaka mandray fiaramanidina roa, Boeing 737, miaraka ao an-toerana amin’izao fotoana izao. Marihina mantsy fa efa manana velarana 3.022 m2 ary mahazaka mpandeha hatramin’ny 250.000 izy amin’izao fotoana izao. «Tombony ho antsika ny fananana seranam-piaramanidina lehibe sy manara-penitra toy izao mba ahafahan’ireo kaompania vahiny mampiasa sy miantsona eto Toliara. Hitombo sy hiroborobo ny fizahantany manomboka izao », hoy hatrany ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina.
Tsena « Filongoa »
Etsy andaniny, anisan’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena niarahana tamin’ny ministera misahana izany (M2PATE) sy ny ben’ny tanànan’i Toliara ny fananganana tsena vaovao. Tanteraka izany ankehitriny ka nahazo tsena vaovao nomena anarana « Bazary Filongoa » ny tampon-tanànan’i Toliara. Sambany no nisian’ny tsena manara-penitra ao an-toerana ary manakaiky sy manamorona ny sisin-dranomasina izany. Ahitana tranombarotra voatokana ho an’ny asa tanana manokana sy tranombarotra maninjara ireo entana ilaina andavanandro. Voalaza fa ny kaominina kosa no mitantana ity tsena vaovao ity. Tafiditra ihany koa amin’ny Tetikasa Pic 2 izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena ihany koa io tsena vaovao io.
Ankoatra izay, nijery manokana ny mahakasika ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny Filoham-pirenena ka nanolotra « ambulance » iray sy fiara tsy mataho-dalana iray ho an’ny tobim-pahasalamana. Nanolotra môtô miisa 21 ho an’ireo Distrika ihany koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ka môtô iray ho an’i Morombe, efatra ho an’i Sakaraha, ary 16 ho an’i Toliara.
Mitohy hatrany ny fitokanana ka nahazo ny anjaram-panavaozana sy fanatsarana ihany koa ny tranoben’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria ao Toliara. Ahitana efitrano manokana ho an’ny Economic Development Board of Madagascar na EDBM ao anatiny ary koa efitrano misahana ny raharaham-panjakana amin’ny Faritra Atsimo Andrefana (Centre d’Afffaire de la Région Sud Ouest). Nasiam-panamboarana sy fanavaozana tanteraka ny tranon’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria, ivelany sy anatiny, hatrany amin’ny tokontany fiantsonan’ny fiara. « Ahafahana mampiroborobo ny sehatra tsy miankina ny fananana birao manokana vaovao misahana izany ka anjaranareo ny mikolokolo izany hatrany », hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
MN (Iraka manokana Toliara)
Iraka manokana. Noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha omaly ny iraky ny Vondrona Eoropeana, ny Tale mpitantana momba an’i Afrika ho an’ireo andraikitra ivelany, Koen Vervaeke. Niara-dia taminy tamin’izany ny lehiben’ny delegasion’ny ...Tohiny